သက်တန့်ချို: ကျွန်ုပ်နှင့်သွေးဆာနေသောမြို့တစ်မြို့ (အပိုင်း ၅)
ကျွန်ုပ်မှာ သီတာအား ကြည့်လိုက်ရာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေဟန်မရှိပဲ မျက်နှာမှာ လွန်စွာ တည်ငြိမ်လှပေ၏ ။ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်၏ ညီမပီသပါပေသည် ဟုစိတ်ထဲမှ တွေးလိုက်မိသည် ။ သီတာမှာ လက်ထဲမှ အထုပ်အား ဘေး တွင် ခဏချ၍ အသင့်အနေအထားတွင် ရှိနေလေသည် ။ သီတာ၏ နေရာယူပုံကိုကြည့်၍ ကျွန်ုပ်မှာ လွန်စွာ အံ့သြသွားမိ၏ ။ သာမန် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦးကဲ့သို့ သိုင်းကွက်တစ်ခုအား ခင်းနေဟန်နှင့်မတူပဲ ခြေထောက်နှင့် လက်ကို လျော့ထားပြီး ပျော့ပြောင်းနေဟန်မှာ လွန်စွာ အန္တရာယ်များလှသော တိုက်ခိုက်ရေးသမား တစ်ဦးနှင့် တူလှပေသည် ။ ထိုအခိုက် လူရမ်းကားတစ်ဦးက သီတာပခုံးပေါ်သို့ လက်တစ် ဖက်တင်လိုက်ရာ သီတာက ၄င်း၏ လက်မောင်း ရိုးအားကိုင်၍ စွေ့ကနဲ့မြှောက်တင်လိုက်ရာ ဖက်ရွက်လေး တစ်ရွက်အား လေပေါ် ပင့်တင်လိုက်သည်နှင့် တူလှပေ သည် ။ ထို့နောက် မြောက်တက်သွားသော လူရမ်းကား၏ မျက်နှာအား သူမ၏ ဖြောင့်တန်းသော ခြေကန်ချက်နှင့် မိတ်ဆက်လိုက်သည်မှာ လွန်စွာ ကြည့်ကောင်း လှပေသည် ။ ထိုလူမှာ အွတ်ကနဲသာ အသံမြည်လာပြီး လုံးဝလှုပ်ရှား ခြင်းမရှိပဲ ငြိမ်သက်သွားလေသည် ။
ကျန်နှစ်ယောက်မှာ သီတာကိုကြည့်ပြီးကြောင်သွားကြလေသည် ။ သူတို့စိတ်ထဲ ဘာဖြစ်သွားမှန်းသိဟန်မတူပေ ။ ထိုလူနှစ် ဦး သီတာ့အား ငေးမောနေခိုက် သီတာမှာ ရုတ်တရက်ခုန်လိုက်ပြီး လူနှစ်ဦးစလုံး၏ မျက်နှာအား ဒူးနှင့် တိုက်ချလိုက်ပုံမှာ ပိရိသေသပ်လှသော တိုက်ကွက်တစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည် ။ တစ်ဦး၏ဒူးပေါ်သို့ ခြေနင်းပြီး မေးစေ့ အား တိုက်ချပြီးသည်နှင့် ကျန်တစ်ဦး၏ ပခုံးအားကိုင်၍ လေထဲမှာပင်လှည့်၍ မျက်နှာအား ဒူးနှင့်တိုက်ချ လိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်၏ ။ အဖြစ်အပျက်က စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာ ။ လူ၃ ဦးကား မှောက်နေလေပြီ ။ ထို့နောက်သီတာမှာ ဘေးတွင် ချသောအိတ်ကိုဆွဲကာ နောက်သို့ပြန်လှည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးအား တွေ့မြင်သွားမှ လျောက်လာ လေတော့သည် ။
" လမ်းမှာ အမှိုက်လေးတွေတွေ့လို့ ရှင်းနေတာအစ်ကိုရေ "
" ဟူး....စိုးရိမ်လိုက်ရတာဗျာ သီတာကို ဒီလောက်တော်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားမှန်းအကို မသိခဲ့ဘူး ဒါကြောင့် လည်း ကိုနိုင် ဇော်က လုံးဝမစိုးရိမ်တာကိုး "
" ဒီလောက်ကတော့သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလောက်ပဲ ရှိပါတယ်အစ်ကိုရာ Ghost City မှာဒီထက်ဆိုး တဲ့ အန္တရာယ် တွေ အများကြီး တွေ့ရဦးမှာပါ "
ဟုပြောလေသည် ။ သီတာ၏ တိုက်ခိုက်ရေးအတတ်ကို တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်မှာ သီတာအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် မှုတော့ အတော် အသင့်လျော့သွားလေသည် ။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၃ ဦးလည်း စကားတပြောပြောနှင့် ပြန်ခဲ့ကြလေတော့သည် ။ သီတာ နှင့်စကားပြောနေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ ဘယ်ဖက်ရင်အုံတွင် ထူးဆန်းစွာ ခုန် လျှက်ရှိပေသည် ။ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်ကတော့ ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရင်း ပြုံးစိစိ လုပ်နေလေရာ ကျွန်ုပ်မှာ မျက်နှာမ ထားတတ်အောင်ပင် ရှိလေ တော့သည် ။ သို့နှင့် ထိုတစ်ညလုံး ကျွန်ုပ်မှာ ကောင်းစွာ အိပ်မပျော်တော့ပေ ။ အကြောင်းရင်းကား သီတာဆိုသော မိန်းမပျို လေး၏ မျက်နှာမှာ အချိန်တစ်ဝက်ကို ယူထားပြီး Ghost City ၏ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများက အချိန် တစ်ဝက်ယူထားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည် ။ သို့နှင့် နောက်တစ်ရက်နေ့ လည်သို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့လည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုယ်သယ်၍ Willian နှင့်ချိန်းထားရာ ဘားဆီ သို့ ထွက်ခဲ့ကြလေတော့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးဦးစလုံးမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုယ်စီနှင့်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက် တွင်ဓါးမြှောင်ထည့်ရန် အိတ်များကိုယ်စီပါကြလေသည် ။
သို့နှင့် ဘားသို့ေ၇ာက်သောအခါ အသင့်စောင့်နေသော Willian နှင့် တွေ့လေသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း စကား ခဏပြောပြီး သည်နှင့် အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ ငှားထားသော ကားနှင့် Ghost City ၏ ခရီးစဉ်အား စတင် ခဲ့ကြလေတော့သည် ။ လမ်းခရီးတလျောက်တွင် အာဖရိကဒေသ၏ လွပ်လပ်သော သဘာဝတရားနှင့် ကုန်မြေ မို့မို့များ လွင်တီးခေါင်ပြင်များကို ငေးမောရင်း လိုက်ပါလာကြလေသည် ။ သီတာမှာ မြို့ပြအငွေ့အသက်နှင့် ဝေးကွာ သော လမ်းခရီးတွင် အပျော်ကြီးပျော်နေဟန်ရှိလေသည် ။ မြင်းကျားအုပ်စုများနှင့် ကုလားအုတ်များ ၊ ဆင်ရိုင်း အုပ်စုကြီးများ ၊ လွင်တီးခေါင်ပြင်တွင် လွပ်လပ်စွာ သွားလာနေကြသည်မှာ သဘာဝ ပန်းချီကား တစ်ချပ်နှယ်ပင် ။ ရေအိုင် ကြီးများတွင် ရွှံနွံလူးနေကြသော ရေမြင်းကြီးများ ၊ လားသတ္တ၀ါများနှင့် ဟိုတစ်စုဒီ တစ်စု သွားလာနေကြသော သတ္တ၀ါ များကို တွေ့ရလေသည် ။ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်မှာ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာ နေလေသည် ။ ထွန်းလူ ၊ ညိုမောင်နှင့် သီတာတို့ ၃ဦးမှာ စကားကောင်းလျှက် လမ်းခရီးတလျောက်လုံး ရယ်မော ပျော်ရွှင်လျှက်ရှိပေသည် ။ ကျွန်ုပ်မှာသာ Ghost City တွင် တွေ့ကြုံနိုင်မည့် အန္တရာယ်များနှင့် Dr.Thomas ၏ အကြောင်းအား တွေးရင်းလိုက်ပါလာခဲ့တော့သည် ။
သို့ဖြင့် လမ်းခရီးကြမ်းကြမ်းတွင် ခရီးနှင်ရင်း ည ၇ နာရီခန့်တွင် ဘူတာရုံပျက်လေးအား လှမ်းမြင် လိုက်ရ လေသည် ။ မြင်ကွင်း ကားမကောင်းလှ ။ ညမှောင်စပြုလာသောအချိန်တွင် ရထားတွဲများက အပိုင်းပိုင်း အစစနှင့် လဲနေသည့် အတွဲများ လည်း ရှိ၏ ။ Willian ကား ဘူတာရုံပျက်သို့ လိုက်ပို့ပြီးသည်နှင့် တခဏ မျှသာနားလေသည် ။
" ကဲ ကျွန်တော်လည်း ပြန်တော့မယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့လည်း Ghost City မှာ ဘာအန္တရာယ်မှမကြုံပါစေနဲ့လို့ ကျုပ်ဆု တောင်းပေးပါတယ် ဒီရထားသံလမ်းတိုင်း လိုက်သွားရင် Ghost City ရဲ့ ဘူတာရုံကိုရောက်ပါတယ် ဒီထက် ရှေ့ကို ကားက ဆက်မောင်းလို့ မရတဲ့အတွက် ကျုပ်ကို ခွှင့်လွှတ်ပါ "
" ရပါတယ် ..Willian ရယ် ဒီလောက်ထိ ကူညီတာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းသာလှပါပြီ ဒီမှာ ကားငှားခငွေ "
ဟုဆိုကာ ကျွန်ုပ်က ကျသင့်ငွေထုတ်ပေးလိုက်သောအခါ Willian မှာ လာလမ်းအတိုင်း ကားကို မောင်းကာ လှည့်ပြန်သွားလေတော့သည် ။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ငါးဦးလည်း ဘူတာရုံပျက်တွင် ပင် ယနေ့ညအား စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ ရာသီဥတုက အာဖရိကတွင် နေ့လည် ပူသလောက် ညဖက်အချိန်တွင် အေးစက် လာပြီဖြစ်၍ မီးပုံကို အရင်ဖိုရလေသည် ။ ထင်းရှာသူကရှာ မီးဖိုသူကဖိုနှင့် သီတာပါလာသောကြောင့် စားရေး သောက်ရေးအတွက် တော့ ကျွန်ုပ် တို့အတွက်မပူရတော့ပေ ။ သီတာမှာ ပါလာသော အသားခြောက်များအား ကင်တန်ကင် ၊ ချက်တန်ချက် နှင့် အလုပ်များနေလေတော့သည် ။ ထမင်းတစ်အိုးချက်ခန့်ကြာသောအခါ လွန်စွာ မွှေးပျံ့သော ဟင်းရနံ့ များ ထွက်ပေါ်လာလေသည် ။
ထိုသို့သော ဟင်းရနံ့များက တစ်စုံတစ်ခုသော အန္တရာယ်အား ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ ရှိသည်ကို ထိုစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့ မသိရှိခဲ့ကြပေ ။
(လာမည့် ၂ရက်တွင် အွန်လိုင်းမတက်နိုင်ပါသောကြောင့် ကျန်အပိုင်းဆက်များအား အဂါင်္နေ့မှ စ၍ နေ့စဉ်တင် ပေးသွား ပါမည် ။ သည်းခံ၍ စောင့်ပြီးဖတ်ပေးကြပါ ချစ်သောသူငယ်ချင်းများခင်ဗျား)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:40 AM
နိုင်နိုင် July 24, 2010 at 10:46 AM
kavan July 24, 2010 at 1:06 PM
himm. keep u r promise.
kavan July 24, 2010 at 1:09 PM
if there is beautyful girl,
I also wanna join when u go next trip :)
try bro very good.
ဆောင်းနှင်းရွက် August 6, 2010 at 10:00 PM
၁ မိနစ် = ရင်ခုန်နှုန်း ၉၀ ... လား.. :D